Google Adwords: Mitahiry vola roa ... | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 5, 2007 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Andro vitsy lasa izay dia gaga aho nahita ny doka Adwords nataoko tao amin'ny tranonkalako manokana. Toa hadalana ho ahy ny tsy manafatra ny sehatra tena izy atolotry ny dokambarotra Google Adwords.
Ka raha te hitahiry vola roa ianao nefa tsy asian'ny olona tsindry ny dokambarotrao hankanesanao ao amin'ny tranokalanao fa efa eo izy ireo dia tadidio ny manampy ny tranokalanao amin'ny sivana doka mifaninana ao amin'ny Google Adsense.
Jul 5, 2007 amin'ny 10: 29 AM
Vao avy nanao Google AdWords tany am-piasana aho. Misy boky tsara momba an'io lohahevitra io ve azonao atolotra? Misaotra.
Jul 5, 2007 amin'ny 11: 13 AM
Tsy azoko antoka - fa jereo PPC Hero – bilaogy iray tohanan'ny mpiara-miasa amiko izy io, Pat Atsinanana. Manampahaizana manokana amin'izany izy ireo - vaovao tanteraka aho!
Jolay 5, 2007 amin'ny 7:14 PM
Misaotra Doug. Hojereko…
Jul 6, 2007 amin'ny 1: 32 AM
Toa hafahafa izany. Tsy fantatro fa ny Google AdWords dia tsy manivana ho azy ny sehatra tena tondroin'ny doka.
Misaotra anao nandefa an'io tao amin'ny blôginao! Mila mijery aho raha tsy mampiseho ny dokako manokana amin'ny tranokalako manokana izy ireo.